War Deg Deg Ah:-Madaxweyne, Maxamed Yuusuf Jaamac Iyo Wufuud Uu Hogaaminayo Oo Saaka Soo Gaadhey Magaalada Buuhoodle(Warbixin) – Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey
War Deg Deg Ah:-Madaxweyne, Maxamed Yuusuf Jaamac Iyo Wufuud Uu Hogaaminayo Oo Saaka Soo Gaadhey Magaalada Buuhoodle(Warbixin)
Buuhoodle(Allssc)Madaxweynaha maamulka goboleedka Khaatumo State Of Somalia, Mudane Maxamed Yuusuf Jaamac Halac”Indhosheel” Iyo Wufuud uu hogaaminayo ayaa saaka subaxnimadii si nabad gelyo ah kusoo gaadhay caasimada gobolka Cayn ee magaalada Buuhoodle.
Socdaalkan madaxweynaha ayaa ahaa mid uu kaga soo kicitimey caasimada ku meel gaadhka ah ee maamulka Khaatumo State ee magaalada taariikhiga ah ee Taleex.
Socdaalkan uu kusoo jirey madaxweynaha maamulka Khaatumo State oo saaka subaxnimadii lagu soo dhaweeyay caasimada gobolka Cayn, Ayuu madaxweynuhu ku soo marey deegaano badan oo ka tirsan maamulkiisa, Yadoo saddex casho kahorna madaxweynaha lagu soo dhaweeyay deegaanka”Saaxdheer” oo ka tirsan gobolka Sool.
Sidoo kale Madaxweyha ayaa maalinimadii shalay ahayd socdaal ku gaadhey deegaano badan oo ka tirsan gobolka Cayn iyo Gobolka Sool ba, Yadoo madaxweynahu uu maalinimadii shalay ahayd uu ku sugnaa magaalada”Balicad” halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi.
Hadaba saaka subaxnimadii ayuu soo gaadhey Madaxweynu Maxamed Yuusuf Jaamaca”Indhosheel” Caasimada gobolka Cayn ee magaalada Buuhoodle, Yadoo uusan madaxweynuhu wali ka warbixin safarkiisii uu soo marey tan iyo intii uu kasoo kicitimey caasimada maamul goboleedka Khaatumo State ee magaalada taariikhiga ah ee Taleex.
Soodhweyntan balaadhan ee lasoo dhaweeyay madweynaha maamulka Khaatumo State, Ee saaka ka dhacdey gudaha magaalada Buuhoodle ayaa imaneysa xili ay bulshada ku dhaqan deegaankani sugayeen xubnaha ugu sarsareeya golaha madaxtooyada ee maamulka Khaatumo State.
Hadaba soo dhaweynta saaka lasoo dhaweeyay madaxweynaha Maamulka Khaatumo State gudaha magaalada Buuhoodle ayaa uu madaxweynuhu sheegay in uu ka warbixin doono socdaalkiisan iyo waxqabad yada ay gaadheen intii ay ka maqnaayeen gudaha magaalada Buuhoodle.
Hadaba Wixii Wara Ee Soo Kordha Kala Soco Shabakada Warar Allssc.com/Online